Couscous leh yaanyo iyo saytuun madow | Cuntooyinka Jikada
Couscous leh yaanyo iyo saytuun madow
Maria vazquez | 21/08/2021 10:00 | baastada
Tani waa mid ka mid ah cuntooyinka fudud ee la diyaariyo taas oo aad u jeesan karto marka aadan dareemayn karin karinta. Ilma -adeerka leh yaanyada iyo saytuunka madow waxaa lagu diyaariyaa shan daqiiqo gudahood. Haa, si sax ah ayaad u akhriday. Cuntad aad waxtar u leh maalmahan xagaaga marka aadan rabin inaad gasho jikada.
Tamaandho hadda waa xilli. Cunista yaanyada wanaagsani ma aha wax fudud inta lagu jiro sannadka intiisa kale sidaas waa inaan ka faa'iideysanaa hadda in ay fududahay in laga helo suuqyada. Tamaandhada ka sokow, waxaan ku daray xoogaa farmaajo mozzarella ah iyo qaar saytuun ah cuntadii aad ku beddeli lahayd maaddooyinka kale.
Waa maxay maaddooyinka aad ka yaaban tahay? Qaar ka mid ah berde la qalajiyey ama anchovies, tusaale ahaan. Kii hore wuxuu ku dari doonaa taabasho macaan isku -darkii couscous iyo yaanyo kii dambe wuxuu ku dari doonaa taabasho milix leh. Sidoo kale, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ku dhadhamiso couscous dhir udgoon aad jeceshahay.
Ilma -adeerka leh yaanyada iyo saytuunka madow ee aan maanta diyaarinno ayaa aad waxtar u leh. Cunto aad u dhakhso badan oo la diyaariyo, oo qumman marka aysan jirin waqti ama rabitaan cunto karis.
Nooca cuntada: baastada
Waqtiga diyaarinta: 2 m
Wadarta waqtiga: 7 m
½ koob quraac ilma adeer ah
½ koob maraq qudaar ah quraacda
1 yaanyo bislaaday
10 saytuun madow
1 kubad mozzarella
Biyaha waan kululeynaa leh qanjaruufo cusbo, basbaas iyo oregano. Marka uu karkariyo, ku dar ilma -adeerka, walaaq, daboolka saar dabkana dami.
Waxaan karineynaa couscous ilaa 4 daqiiqo ama waqtiga uu soo saaray soo -saaraha.
Kadibna waxaan ku darnaa shaaha oo saliid ah iyo waan sii daynnaa a waxaan leenahay badarkii.
Waxaan ku qaybinnaa ilma -adeerka laba saxan iyo waxaan ku daboolnaa xaleef yaanyo khafiif ah.
Kadib waxaan ku darnaa saytuunka iyo farmaajo la jarjaray.
Waxaan cusbo iyo basbaas, waxaan ku lebbisnaa saliid baraf ah oo waxaan ku raaxaysanaa ilma -adeerkaan tamaandho iyo saytuun madow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » baastada » Couscous leh yaanyo iyo saytuun madow
Khudaarta xagaaga oo leh yaanyo iyo hake la jarjaray